DRYWALL studs ave mashoma mashiripiti uye akareba muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Ivo vaimbove vaishandiswa mune yepamusoro-kirasi Dzimba uye mainjiniya kuvaka, asi izvozvi zvakare chimwe chezvinhu zvinonyanya kushandiswa zvekuvaka, semuenzaniso, isu tinofanirwa kugadzirisa chinhu ...
Nekuenderera mberi kwekuvandudza tekinoroji, kwakakurudzira mitsara mumakore achangopfuura ane hutsva kuvandudzwa, kwakakurudzira mutsetse kubuda kwemarara kupisa kupora system, uye mune mimwe mitsara yekugadzira. Annealing vira ine inopenya chubhu isina kunanga kupisa ...
Chipikiri kugadzirwa kwemaitiro kuri kunyanya kudhirowa, kutonhora musoro, kupora uye mamwe maitiro. Chipikiri kugadzirwa mbishi zvigadzirwa idiski, ndokuti diski yesimbi, mushure mekukweva waya, dhonza dhayamita yeNail Rod, uyezve mushure mekutonhora musoro, chipikiri ...
Galvanizing (inotonhorera galvanizing) Iron Wire Kugadzira Maitiro
Kwakakurudzira (kutonhora galvanizing) Iron Wire Production Maitiro: Galvanizing simbi waya ndeimwe yemapoka mazhinji esimbi waya, inonziwo inotonhorera galvanizing waya, GI waya, inosunga waya, mashandisiro ayo akafara kwazvo, kwakakurudzira (kutonhora kwakakurudzira) iron w ...
Yakajairika Nail uye Simbi Nail Musiyano
Chairo chipikiri nesimbi simbi musiyano mukuru uri mukushandiswa kwemusiyano. Kazhinji Nails anowanzo shandiswa kumatanda zvikamu zvekubatana, inogadzirwa neGeneral yakaderera-kabhoni simbi, yakapusa kugadzira, yakaderera mutengo. Iyo simbi chipikiri zvinhu ...